Harrier Portable လက်လှည့် Juicer | Buy online | SHOP.COM.MM
Harrier Portable လက်လှည့် Juicer
Ks 24,000 -23%
Portable လက်လှည့် Juicer
You can juice every time ,every where to every fruit as you which , be healthy .
အခုလိုအရမ်းပူတဲ့နွေရာသီမှာ ကျန်းမာရေအတွက် လတ်ဆတ်တဲ့သီးနှံများကို အလွယ်တကူးJuice လုပ်၍သောက်သုံးနိုင်သော portable လက်လှည့် juicerလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကြိုက်သည့်အသီနှံများကိုဝယ်ယူပြီးJuice လုပ်ကားအရည်သက်သက် အဖတ်ဖတ် စစ်ထုတ်၍သောက်သုံးနိုင်သောjuicer လေးဘဲဖြစ်ပါသည်
Beat for your healthy for summer season.
Portable á€œá€€á€¹á€œá€½á€Šá€¹á€· Juicer
Specifications of Portable လက်လှည့် Juicer